မေမေကိုပြုစုခွင့် ရလိုက်တယ် …ဒီကနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို ရဲ့မိခင်…. – Shwe Naung
မေမေကိုပြုစုခွင့် ရလိုက်တယ် …ဒီကနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို ရဲ့မိခင်….
ချစ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်တစ် ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးဟေကိုဟာ ဆိုရင်ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယို ဇာတ်ကားပေါင်း များစွာကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက် ဖြစ်လို့ပရိတ်သတ် အားပေးမှုအပြည့်အဝ ရရှိထားတာ ပြီး
အနုပညာလမ်းကြောင်းကို အောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။သူမဟာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ် ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေမှာ မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ မပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
လူထု လှုပ်ရှားမှုမှာ ပြည်သူလူထု နဲ့အတူမပါဝင်တဲ့ အတွက်ပရိတ်သတ် တွေရဲ့အထင်လွဲဝေဖန် မှုတွေကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရ တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ မိခင်ကြီးကို သူမကိုယ်တိုင် ပြူစုပေးနေရတာ ကိုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မှာတော့ ပရိတ်သတ်တွေနားလည်းပေးတာကို လည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရ ပါသေးတယ်နော်..။
ဒီကနေ့မှာဆိုရငျတော့ မိုးဟကေိုရဲ့ ခစြျလှစှာသောမိခငျကွီးဟာ (၉၆)ပါးသောဝဒေနာနဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ တာပဲဖွစျပါတယျနောျ။မိုးဟကေိုရဲ့ မိခငျကွီးကှယျလှနျ သှားကွောငျးကို ကိုဂြှနျလှငျ (Star & Model International Agency) ကသူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကြျနှာကနတေစျဆငျ့ အသိပေးပွောပွလာခဲ့ တပဲဖွစျပါ တယျနောျ။
ကိုဂြှနျလှငျက “သိပျခစြျရတဲ့သမီးမိုးဟကေို ရဲ့အမအေခုပဲ ကွှလှေငျ့သှားပါပွီ စိတျထိခိုကျ ရပါတယျ အနျတီကောငျးရာ သုဂတိလားပါစေ” ဆိုပွီး ရေးသား လာတာ ပဲဖွစျပါတယျ။ခုလို သတငျးကွားရတဲ့ အတှကျ မိုးဟနေဲ့ ထပျတူဝမျးနညျးကွကှေဲ ရပါတယျ။
အနျတီကောငျးရာ မှနျရာ ဘုံဘဝကိုရောကျရှိ ခံစား၊စံစားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျ ကွီးကို အထူးပဲ ကေးဇြူးတငျရှိ ပါတယျ။
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…………